Nagu Saabsan - RISIN ENERGY CO., LIMITED
RISIN ENERGY CO., LIMITED waxaa la aasaasay sanadkii 2010 wuxuuna ku yaal magaalada Dongguan City. Kadib in kabadan 10 sano oo horumar joogto ah iyo hal abuurnimo ah, RISIN ENERGY waxay noqotey soo saare waara oo lagu kalsoonaan karo ee alaabada Solar PV.
RISIN ENERGY waxay leeyihiin awood ay ku soo bandhigaan Solar PV Cable, Solar PV Connector, DC Circuit Breakers, Solar Charger Controller, Anderson Power Connector iyo qalabyada kale ee sawirada sawirka.
RISIN ENERGY waxay ku jihaysan tahay baahida macaamiisha ee leh kooxaha R&D ee adag, iyagoo diiradda saaraya bixinta tayada ugu wanaagsan iyo Adeegyada iyada oo loo sii marayo hagaajinta joogtada ah ee alaabada qorraxda, xakamaynta adag ee maareynta tayada iyo adeegga iibka ka dib.
XAALADAHA SQUARE METER
Marka qorraxdu soo baxdo, maalin cusub ayaa bilaabaneysa.
Tamarta cusub, Nolol cusub.
RISIN ENERGY waxay leeyihiin wax kabadan 10+ Sano khibrad wax ku ool ah Solar PV Business iyo Ganacsiga Caalamiga ah.
RISIN ENERGY 'Solar PV Cable' waxay ku tiirsan tahay koox R&D ah oo adag, khadadka waxsoosaarka saxda ah iyo qalabeynta qalabka (Sida Mashiinka jiidaha naxaaska ah, Mashiinka Xarkaha Naxaasta ah & Xirmooyinka Qalliinka, Nidaamka Wareejinta Maqaarka ee Xarka, Mashiinka Mashiinka Xirmidda ee Xarka, Mashiinka Xarkaha, Qufulka Mashiinka, Fidida korantada, Mashiinka Duubista, Dhimashada Laabka / Xarigga / Mashiinka Dambe. iwm.), dhammaan howlaha iyo wax soo saarka waa in ay baaraan waaxda QC ka hor inta aan la rarin.
RISIN ENERGY 'Solar Cable' waxay abaalmarisay TUV 2PfG 1169 1000VDC iyo TUV EN50618 H1Z2Z2-K 1500VDC Shahaadooyinka oo leh 25years damaanad iyo nolol shaqo.
RISIN ENERGY 'MC4 Solar Connector' waxay leeyihiin habka maaraynta casriyeynta iyo hanaanka wax soosaarka otomaatiga. Qalabka Die Casting Pin Machine, Mashiinka Cirbida Balaastigga, Hawsha Meeleynta Meelaha Shumaca, Auto Assembly O giraanta & Guri isku xirka mashiinka, habka tijaabada iska caabinta, Mashiinka tijaabada biyaha, hanaanka tijaabada ceelasha biyaha, hanaanka baaritaanka tijaabada ceelasha iyo xirmooyinka caagagga iyo baakadaha xasilan. iwm. Dhamaan howlaha iyo isku xirka qoraxda waa iney hubiyaan QC.
RISIN ENERGY 'Solar DC Connector' waxay leeyihiin oggolaansho 1000V TUV EN50521: 2008 iyo 1500V EN62852: 2015 shahaadooyin wata 25years dammaanad iyo nolosha shaqada.
KU SOO DHAWAADA DALKA RISIN.
WAA MAXAY Macaamiisha Dheeraad?
"Xargahaaga korantada qorraxda aad ayey u wanaagsan tahay. Mr. Michael waa mid aad u fiican. Waxaan ku faraxsanahay la shaqeynta isaga, waa mid caawimaad badan iyo deganaan leh. Waxaan rajeynayaa inaan si dhakhso leh u dalbo fiiloyinka qorraxda ee 6mm oo fadlan marka xigta ha badalin muujinta. mustaqbalka. "
"Xirmooyinkaan loo yaqaan 'PV Cables' iyo isku xirayaasha MC4 ayaa si dhaqso leh u yimid oo aad bay u fududahay in lagu xeroodo qoraxda. Xaqiiqdii waan sii wadayaa inaan ku raadiyo Tamarta Tamarta baahida mustaqbalkeyga qorraxda."
"Michael, sida had iyo jeer adeegga macaamiishaadu aad u fiican yahay. Dadyahow aad baad u fiicneyd haddii aan amarro cusub qaadanno waxaad noqon doontaa wicitaankeenii ugu horreeyay."
"Ragga isku xira labka dheddigga ah ee MC4 iyo Solar Cable waxay ahaayeen tikidhada loogu talo galay in lagu xiro dabayl-bahahayga iyo korantada qoraxda si ay u xoojiso qolka xilliga qaboobaha. Waad ku mahadsan tahay dhammaan soosaarayaasha alaabada qorraxda."
"Waad fududahay inaad ku rakibto nidaamka qoraxda RV. Tayada waa wanaagsan tahay, iskuxirayaasha DC way fiicnaanayaan. Aad ayaan u faraxsanahay ugana faraxsanahay.
"Runtii kama dhihi karo wax ku saabsan badeecadaada qoraxda. Kuma aamini doono qof kale Solar waligiis. Bixinta dhakhsaha badan waligeedna arin ka imaaneysa hal MC4. Waad ku mahadsan tahay inaad shaqeyso waqtigaan hubanti la'aanta ah waad ku mahadsan tahay dhamaan shaqaalahaaga inaad muujisay ilaa shaqada inta lagu jiro musiibada.Sunshine markasta waxay dhacdaa duufaanka kadib. "
"Nidaamkeeyda qoraxda waxaa loo sameeyay Risin tamarta 'MC4 iyo fiiloyinka PV. Ma jiraan wax cabasho ah hadda. Waxay kuxirantahay makiinadaha qorraxda. Alaabada wanaagsan iyo adeegga weyn ee macaamiisha.Thanks."